Free Thinker: Working in Singapore Part X
၁၊ ၂၊ ၉။ အထွေထွေ
၂၀၀၇ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့မှစတင်ကာ စင်ကာပူကို ဆေးလိပ်ကင်းစင်သော လူ့ဘောင်တစ်ခုဖြစ်လာ စေရေး အတွက် ဆေးလိပ်နှင့်ပတ်သက်သည့် ကန့်သတ်ချက်များကို တိုးမြှင့်လိုက်ပါသည်။ ၂၀၀၄ ခုနှစ် ကွင်းဆင်းလေ့လာ ချက်များအရ စင်ကာပူတွင် အရွယ်ရောက်ပြီးသူများ၏ ၁၃ ရာခိုင်နှုံးသာ ဆေးလိပ်သောက်ကြသည်ဖြစ်ရာ ကမ္ဘာ့ ဆေးလိပ်သောက်သုံးမှု အနည်းဆုံး နိုင်ငံများစာရင်းတွင် ပါဝင် ခဲ့ပါသည်။
စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ ဆေးလိပ်များရောင်းချခြင်း ကို ဥပဒေဖြင့် ကန့်သတ် ထားသည်။ ရည်ညွှန်း - 1. Smoking Act (Chapter 309) ၊ 2. www.nea.gov.sg
အကယ်၍ အခွန်မဆောင်ထားသော (SDPC – Singapore Duty-Paid Cigarettes စာတမ်းမပါသော) ဆေးလိပ်များ ကို ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်း ပြုပါက စီးကရက်တစ်ဗူးလျှင် ဒါဏ်ငွေ S$၅၀၀ ထိ၊ သို့မဟုတ် ဒါဏ်ငွေ+ထောင်ဒါဏ် တပ်ရိုက်နိုင်သည်။ (ထိုဥပဒေသည် ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက်နေ့မှ စတင် အတည် ဖြစ်သည်။)
နိုင်ငံခြားမှ လာသော ခရီးသည်များသည် မိမိတို့နှင့်ပါလာသည့် စီးကရက်များကို အခွန် ပေးဆောင်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
အသက် ၁၈ နှစ်အောက် လူငယ်များကို ဆေးလိပ်ရောင်းချခြင်း ခွင့်မပြုပါ။ (ထိုဥပဒေ အပိုဒ် ၆)
စင်ကာပူနိုင်ငံအတွင်း ခွင့်ပြုထားသည့် ဆေးလိပ်များမှလွဲ၍ အခြားစီးကရက်များ၊ ဆေးလိပ်များကို ရောင်းချခွင့်၊ သုံးစွဲခွင့် မပြုပါ။ (ထိုဥပဒေ အပိုဒ် ၈)
ဖျော်ဖြေရေးခန်းမများ၊ ကော်ဖီဆိုင်များ၊ စားသောက်ဆိုင်များ၊ လေအေးစက်တပ်ထားသော ခန်းမများ၊ ရုပ်ရှင်ရုံများ၊ စာသင်ခန်းများ၊ ဘဏ်များ၊ ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းများ၊ ဘိုးဘွားရိပ်သာများ၊ မိုးလုံလေလုံအားကစားရုံများ၊ ဓါတ်လှေခါးများ၊ စာကြည့်တိုက်များ၊ ပန်းချီခန်းမများ၊ လေဆိပ်များ၊ တရားရုံးများ၊ လေအေးပေးစက် တပ်ဆင်ထား သည့် ကုန်တိုက်ကြီးများ၊ ဈေးများ၊ မြေအောက် လူသွားလမ်းများ၊ ကျောင်းများ၊ တက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ်များ၊ ရေကူး ကန်များ၊ ကလေးကစားကွင်းများ၊ အားကစားလေ့ကျင့်ရာ နေရာများ၊ အဆောက်အဦ ၀င်ပေါက်ထွက်ပေါက် မှ ငါးမီတာ အတွင်း မည်သည့်နေရာ မဆို၊ အိမ်သာများ၊ ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်များ၊ ဘတ်စ်ကားဂိတ်များ၊ ဘတ်စ်ကား ပေါ်၊ ရထားပေါ်များ၊ တက္ကစီများ၊ တန်းစီသည့် နေရာများ၊ လေအေးစက်တပ်ထားသည်ဖြစ်စေ၊ မတပ်ထား သည် ဖြစ်စေ အလုပ်လုပ်သည့်နေရာ အားလုံး စသည့်နေရာများတွင် ဆေးလိပ်မသောက်ရပါ။ သို့သော် ဆေးလိပ်သောက် ရန် နေရာများ သတ်မှတ်ပေးထားလျှင်တော့ (Designated Smoking Area) ထိုနေရာများတွင် သောက်နိုင်ပါသည်။
၂၀၀၉ ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက်နေ့မှစကာ ဟော်တယ်ခန်းမများ (Hotel Lobbies) နှင့် ကားရပ်ရာနေရာများ (Car Parks) ကိုပါ ဆေးလိပ်မသောက်ရ နေရာများအဖြစ် တိုးချဲ့သတ်မှတ်လိုက်ပါသည်။ ထို့ပြင် လေအေးစက် မတပ်ထားသော ရုံးခန်းများ၊ အထပ်မြင့် ကားရပ်ရာ အဆောက်အဦ (Multi-storey car parks) များတွင် ပါ ဆေးလိပ်သောက်ခွင့် မပြုပါ။
ရည်ညွှန်း - ၁။ http://app.nea.gov.sg/cms/htdocs/category_sub.asp?cid=248
၂။ The Straits Times Saturday, December 13 2008, Page A8
ကန့်သတ်ထားသော နေရာများတွင် ဆေးလိပ်သောက်ပါက ပထမအကြိမ် ကျူးလွန်ခြင်း - ဒါဏ်ငွေ S$ ၂၀၀. ထပ်မံ ကျူးလွန်ခြင်း S$၁၀၀၀ ထက်မများသော ဒါဏ်ငွေ ချမှတ်နိုင်သည်။ ထို့ပြင် အဆောက်အဦ ပိုင်ရှင်သည် ဆေးလိပ်သောက်သူများကို တားမြစ်ခြင်း မပြုပါက ဒါဏ်ငွေ S$ 2000 ထိ ချမှတ်နိုင်ပါသည်။
ရည်ညွှန်း - www.nea.gov.sg
ရည်ညွှန်းကိုးကား Internet Website များ
၂။ http://statutes.agc.gov.sg/ Employment Act
၃။ http://agcvldb4.agc.gov.sg/ Employment Of Foreign Workers Act
၇။ http://statutes.agc.gov.sg/ Misuse Of Drugs Act (Chapter 185)
၈။ http://statutes.agc.gov.sg/ Offences Involving Controlled Drugs And Substances
၉။ http://statutes.agc.gov.sg/ Immigration Act (Chapter 133)
၁၀။ http://statutes.agc.gov.sg/ Smoking Act (Chapter 309)
၁၁။ http://statutes.agc.gov.sg/ Workmen’s Compensation Act
Posted by အေးငြိမ်း at 10:06 AM